Fampiharana Adobe manokana 3 vaovao ho an'ny famolavolana, sary ary famoronana | Androidsis
Nipoaka ny Adobe tamin'ny herinandro lasa ary nasehony taminay fa rehefa te hidina amin'izany izy dia hainy ny manao zavatra tsara ary manaova fampiharana tsara ho an'ny sary ary famolavolana. Raha efa gaga isika amin'ireo rindrambaiko amin'ny birao izay nanintona ny sari-tany famolavolana amin'ny sehatra manerantany, amin'ny finday dia manana safidy hafa matotra avy amin'ny Adobe mihitsy isika izay manompo antsika noho ny antony maro samihafa.
Fa ny nolazaiko, ny herinandro lasa teo ity orinasa ity niditra tamin'ny fampiharana vaovao 3 ho an'ny sary sy ny endriny izay mety tsy ho diso amin'ny fanendrena horonantsary iray izay ahitanao ireo toetra tsara indrindra sy ny fomba fiasan'izy ireo. Adobe Comp CC, Adobe Photoshop Sketch ary Adobe Photoshop Fix no mpilalao telo lehibe noho ny antony manokana telo: ny fisehosehoana, ny sary an-tsary ary ny famerenana ireo endrika sy sary.
3 Fanamboarana sary Photoshop
Fampiharana manokana ho an'ny fisehon'ny izay manana toetra mampiavaka tena mahaliana toy ny fahaizany mamantatra ireo zavatra voasoratra teo amin'ny efijery mba hahafahantsika manatanteraka ny fanodinkodinana ilaina mba hahitana ny vokatra andrasana. Manamboatra faribolana iray fotsiny isika amin'ny rantsan-tànantsika eo amin'ny efijery, mba hahafantaran'ilay fampiharana azy sy hanintona antsika tsara ho antsika. Manodinkodina ireo teboka fanaraha-maso ireo izahay ary afaka mamorona fomba samihafa handrafitra ny endrika farany.
Hanana pensilihazo, penina, marika, famafana, akrilia matevina, borosy ranomainty, pastel malefaka ary loko voalefaka ho anao eny an-tànanao ataovy ireo asa kanto ireo freehand. Azonao atao aza ny mamindra ireo rakitra multilayer ireo amin'ny Photoshop CC na Illustrator CC.
Ny safidinao hafa dia ny mampiasa borosy vita amin'ny loko Sketch mampiasa Capture CC ho an'ny fampiharana azo ampiharina mba hanao sketches haingana tsy misy fahasahiranana lehibe.
Fanamboarana sary Photoshop
Azo antoka fa efa nahita namana ianao na nifandray tamina sary miavaka somary hafahafa rehefa nanitatra na nampahiratra ny mason'izy ireo. Eto no te-hamely ny fantsika amin'ny loha i Adobe miaraka amin'ny Photoshop Fix mamela manatsaha tarehy na manala endrika ny endrikao amin'ny fomba tsotra ary azo ampiharina tsara, satria avy amin'ireo teboka fanaraha-maso ireo dia azonao atao ny manova ny maso, orona, vava, saokany ary ny takolaka. Fampiharana iray izay azo ampiasaina hanovana sary miaraka amina andiana fitaovana hafa hanalefaka na ireo tena fototra toa ny fanovana ny famirapiratana, ny fifanoherana ary ny antsipiriany hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana vaovao lehibe 3 avy amin'ny Adobe ho an'ny famolavolana, famoronana ary fanaovana sary